करोडपति दावा शेर्पाको ह्युमपाईपमा वास !
२०७७ श्रावण २३, शुक्रबार
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । थोरै असवधानीले जीवनलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ भनेर पछिल्लो पटक सामाजिक सञ्जालमा आएको दुई वटा उदाहरण हेरे पुग्छ । ह्युम पाइपभित्र वास बस्ने दावा शेर्पा र कियर बाल गृह सञ्चालिका पुष्पा अधिकारी ।
यहाँ दावा शेर्पाको चर्चा गर्न खोजिएको छ तर यो विस्तृत विवरण भने होइन । सोलुखुम्बु जिल्ला खुम्बु पासाङल्हमु गाउँपालिका वडा नं. ३ चौरीखर्क स्थायी वतन भएका दावा शेर्पा काठमाडौं चावहिलमा ९ आनामा आलिसान घर बनाएर बसेका एक व्यक्ति हुन । उनैले दिएको जानकारी अनुसार उनी लामो समय अमेरिका पनि वसे । उनका तीन सन्तान मध्ये छोरा मेडिकल डाक्टर छन् । एक छोरी र छोरा अष्ट्रेलियामा वस्छन् । दुबै इन्जिनियर हुन ।
तर, अहिले दावा राजधानीको नयाँ बसपार्कमा भेटिन्छन् । ४ महिनादेखि उनको वास यसै नालीभित्र हुन्छ ।
ह्युम पाइपभित्र वास वस्दै आएका भनिएको शेर्पाको अवस्थाबारे सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रसारन भएपछि आम शेर्पा समुदायको मात्रै नभएर विश्वको ध्यान उनीतिर खिचिएको छ । समाचार प्रकाशन भएपछि उनकी वहिनी लाक्पा याङजी शेर्पाले जिम्मा लिएर ललितपुरको कुसुन्तीमा सँगै राखेका छन् । उनी सडकमा विख मागेर जीविका चलाउँथे । उनीसँगै अर्की महिलापनि उही व्यवहारिसे अवस्थामा भेटेकी छन् । उनको पहिचान खुलाइएको छैन । पारिवारिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको उनीबाट बुझिन्छ ।
खुम्बुृ क्षेत्रमा पनि उनका कराडौंका सम्पती छन् । तर, अहिले उनको हालत देख्दा जोकोहीको मनमा अनेक प्रश्नहरु आउँनु स्वभाविक हो ।
उनका परिवारका सदस्यहरु उनका सम्पर्कमा छैनन । परिवारका सदस्यहरुको अवस्था बारे दावालाई राम्ररी जानकारी छ तर दावा बारे मिडियाबाजी भैरहँदा परिवारका सदस्यहरु भने सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
उनीबारे सञ्चारमाध्यममा व्यापकता छाएपछि शेर्पा समुदायका माउ संस्था नेपाल शेर्पा संघले समेत चासो देखाएको छ । सामाजिक सेवा विभाग प्रमुख साङ्गे लामा शेर्पाको संयोजकत्वमा घटनाबारे अध्ययन गर्न भनिएको छ । दावा शेर्पा बारे महासचिव लाक्पा शेर्पाले विभिन्न व्यक्तिसँग बुझ्ने कार्य भइरहेको र घटनाका बारेमा मसिनो ढंगले अध्ययन गरिरहेको बताए ।
करोडपति दावाको ह्युमपाईपमा बास कसरी भयो ? सञ्चारमाध्यममा रोइलो किन ? हामी छिट्टै विस्तृत लिएर आउँदैछौं ।